Qiimaynta Hay'adda ee ku-dhaqanka Hab-dhaqanka Dhibbanayaasha
Ma tahay urur dhibbane-ku-saleysan? Maxay tahay jawaabtaada hadda ee dhibbanayaasha dembiga?
Khibradda shaqaalaha barnaamijka Caddaaladda Isku midka ah (iyo sida ku cad cilmi baarista hadda jirta), dhibbanayaasha dambiyada waxay leeyihiin saddex baahiyood oo muhiim ah:
si aad u badbaado;
si aad uga soo kabato dhibaatadii dambiga;
si ay dib ugu hantaan xukunka noloshooda.
Hay'adeena Qiimeynta ku Dhaqanka ee Xarumaha Dhibanaha ayaa qalab u ah ururada, hay'adaha, iyo ganacsiyada si loo dhiso wacyigelin ku saabsan sida ay uga jawaabaan dadka la kulmay dhibanaha. Is-qiimayntaani waxay raacdaa Mabaadi'da Hagaya ee Caddaaladda Isbarbar Taagan .
Arrimaha la tixgelinayo waxaa ka mid ah: Shaqaalaha miiska hore ma weydiiyaan su'aalo laga yaabo inay dareemaan dib-u-dhibayn macaamiisha? Shaqaalahaaga adeegga tooska ah miyuu macmiil uga baahan yahay inuu la wadaago sheeko toosan ama waayo-aragnimo ah? Dhaqankaaga maamul ma leeyihiin shuruudo xasaasi u ah waqtiga in dhibbanaha la keeno waraaqo saxeexan ama dukumiintiyo saxeexan si uu u helo taageerada? Qofku miyuu u baahan yahay inuu ku wargaliyo ku xadgudubkiisa fulinta sharciga si uu u helo magdhawga khasaarahooda? Goobtaada shaqadu miyay siisaa fursado fasax-bilow ah ama xilli-dambe ah oo loogu talagalay qof dhibbane dambi loo galay (nooc kasta oo dambi ah)? Ma u baahan yihiin inay "caddeeyaan" si loo rumeeyo?
… Ka dibna Maxaa? Markaad qiimeynta qaadatid, haddii hay'addaada ama hay'addaadu ay jeclaan lahaayeen taageerada la socoshada barnaamijka Caddaaladda ee Parallel Justice si ay hay'addaada ugu hagto xagga dhaqamada ku saleysan dhibbaneyaasha, fadlan nala soo xiriir annaguna waan la xiriiri doonnaa!
Xusuusin: Waxay kuxirantahay baaxada shaqaalahaaga, dhaqamada kaladuwan ee udub dhexaadka u ah dhibanaha, iyo heerka aan faa'iido doonka ahayn / macaash doonka ah ee ururkaaga, waxaa laga yaabaa inaan lacag ka qaadno adeegyadeena taas oo si toos ah uga faa'iideysan doonta Sanduuqa Dhibbanayaasha Caddaaladda Isku midka ah.
Qiimeynta Hay&#39;adda Xarunta Dhibbanaha